ဓမ္မနဒီ: လောကဓံ တရားနှင့် ကြုံလာရင်.
ကာလာမသုတ်တော်မှာ ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကို ရှောင်ကြည်ပါ။ ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ ချီးမွမ်းတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ပါ ဟု လမ်းညွန်ခဲ့ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတော်အရ ပညာရှိဆိုသည်မှာ ဘွဲ့ဒီဂရီ အတန်းပညာမဟုတ်။ အောက်ထစ်ဆုံး ကံ ကံ၏အကျိုးကိုယုံကြည်သော သမ္မာဒိဌိ ဥာဏ်ပညာမှ အစ ပြု ၍ ကိလေသာကိုအမြစ်သတ်ပါယ်သတ်နိုင်သော အရဟတ္တမင်္ဂညာဏ် ဖိုလ်ညာဏ် ရှိသူကို ကို ပညာရှိဟု ဆိုရသည်။
အားကစားသမား တစ်ယောက် ကိုယ်ခန္ဓာ ကြံ့ခိုင်အောင် ပုံမုန် လေ့ကျင့်ခန်း ယူရသလို လောကဓံ တရားနှင့် ကြုံတွေ့ချိန်မှာ မတုန်မလှုပ် သီးခံ နိုင်အောင်. ၀မ်းသာခြင်း ၀မ်းနည်းခြင်း ပြင်းစွာမဖြစ်အောင် စိတ်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ကြပါစို့ဟု တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ရပါတယ်။